Cider, inoshamisa muchinjika-chikuva Apple Music mutengi | Linux Addicts
Cider, mutengi weApple Music mutengi anokatyamadza, pane zvaanoita, nemaitirwo aanozviita uye nekuti anoshanda zvakakwana paLinux.
pablinux | | Multimedia
Pasina kupokana, kana tichitaura nezvekutepfenyura mimhanzi, sevhisi yekutanga inouya mupfungwa ndeye Spotify. Akanga ari, kana asiri wekutanga, akakurudzira iyo yekubhadhara kuzvinyoresa uye kukwanisa kuteerera chero rwiyo chero kupi zvako. Muchokwadi, hautomboda kubhadhara sezvo vaine yavo yemahara vhezheni. Asi pave nemakore manomwe kubva pakabuda mukwikwidzi mumwechete: Apple Music. Vazhinji vedu vane apuro mudziyo vanosarudza yayo yekufambisa mimhanzi sevhisi, asi chii chinoitika kana isu tichida kuiteerera paLinux? Zvakanaka, nhasi ndashamisika kuwana application yakadanwa Cider.
PaMacOS, Apple ine yayo Apple Music app uye ndiyo yakanyanya kunaka, nemvumo kubva ku iPhone uye iPad apps. Ivo vanotarisirwa kuburitsa chinhu chakaita seichi cheWindows, asi parizvino ivo vachiri kuvimba ne iTunes kana iyo web version kubva kubasa. Iyo yekupedzisira inoshanda, asi iri kure nekuve desktop application. Uye iTunes, zvakanaka, pandakaishandisa palaptop yangu ine usimbe ndakaona kuti yairema kwazvo. Uye zvakare, iTunes nhasi ndeyekare gadziriso, haina chekuita nemashandisirwo eApple zvishandiso. Asi Cider hongu Rine zviro zvinouya kushamisa.
1 Cider inopa mhando, sarudzo uye kunyange animated zvivharo
2 ndinosuwa chii
Cider inopa mhando, sarudzo uye kunyange animated zvivharo
Tarisa pane iyo yemusoro skrini. Kana uyo ari kumusoro uku. The dhizaini yakafanana chaizvo neiyo inopihwa neApple, saka zvinoita kuti zvinhu zvive nyore kune isu takajaira kuve neraibhurari yavo yemimhanzi. Zvinokosha kuziva kuti zvinosanganisira zvinhu zvakaita semavhavha ane animated. Semuenzaniso, mune yazvino Iron Maiden album, Senjutsu, tinoona Eddie achifambisa katana, uye mune ino naAvril Lavigne tinoona kuti mabharumu anofamba sei zvishoma, mimvuri yavo zvishoma uye kunyange mheni.
Iko kushandiswa kunotanga muChirungu, ingangoita shanduro yeAppImage, ndiyo yandiri kushandisa, asi inogona kuiswa muchiSpanish. Iyo ine sarudzo yekuona mazwi, iyo mutsara runyorwa uye akawanda maficha mukusimudzira, senge mukana wekutumira odhiyo neChromecast kana AirPlay. Kana zvese izvi zvichiita sezvidiki, futi tinogona kuremote control playback, kuongorora QR kodhi iyo ichatiendesa kune web interface mubrowser iyo ichaita senge kure kure.
Iyo ine zvakare yakaenzana, chimwe chinhu chinoita sechakakosha kwandiri, uye zvakanyanya muLinux, uko nekusarudzika hazvinzwika sezvakanaka sezvazvinoita. kwandiri ndinoda. Mukuwedzera, Cider inokutendera kuti uteerere mimhanzi ine mhando yepamusoro.
Zvakanaka, kana ndisiri kukanganisa, uye kana zvikasandiruramisa, iyo yepamutemo Spotify application, ingangoita iyo Linux imwe, haikutendere iwe kurodha nziyo kana. iTunes yeWindows inoibvumira, saka inogona kushandiswa kunze kwenyika, asi kwete muCider. Zvinonzwisisika, kana tikafunga izvozvo hachisi chikumbiro chepamutemo. Zvinocherechedzwa zvakare kuti iyi iAlfa vhezheni, uye kuridza mimhanzi nemhando yakanaka, kuve neanopopotera emavhavha akabatidzwa uye achifamba-famba neapp anogona kuita kuti mimhanzi irambe ichirira nguva nenguva; izvi hazviitike kana isu tiine application irikumhanya kumashure, kunyangwe ichidya zviwanikwa uye isingakurudzirwe kumakomputa asina simba. Imwe yezvibodzwa zvekuvandudza ichava iyi.
Kune zvimwe zvese, zvinoita sekunge tiri kubata neapp yakaburitswa neApple. Tinogona kutevera maartist, tinogona kugadzira zviteshi zveredhiyo kubva kumaartist, maalbum kana nziyo uye isu tinokwanisa kuwana mavhidhiyo ari pachikuva. Zvipi isu hatigone kuridza zviteshi zvatisingakwanise kutamba pawebhu vhezheni zvakare kubva kuApple Music, zvinonyadzisa, asi ini handina kushamisika kana.
Ini ndinonyatsoziva kuti havasi vazhinji vashandisi veLinux vachanyoreswa kuApple Music, asi inyaya yekuravira uye zvakare kuti iwe unoshandisa iPhone, iPad kana Apple komputa. Kana iwe uri mumwe wedu, iwe unofarira chaizvo Cider.
Cider inowanikwa seAppImage, Snap uye DEB package kubva kune yayo yepamutemo webhusaiti, iripo pano. Inogona zvakare kutorwa kubva kuFlathub.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » Cider, mutengi weApple Music mutengi anokatyamadza, pane zvaanoita, nemaitirwo aanozviita uye nekuti anoshanda zvakakwana paLinux.
Valve's Steam ichave zvakare paChromeOS
Maitiro ekubatanidza nharembozha pakombuta neLinux